Warbixin: Codbixinta Doorashada Madaxtooyada Djibouti | Berberanews.com
Home WARARKA Warbixin: Codbixinta Doorashada Madaxtooyada Djibouti
Warbixin: Codbixinta Doorashada Madaxtooyada Djibouti
Djibouti-(Berberanews)-Dadka reer Jabuuti oo ayaa maanta u darreeray goobaha codbixinta doorashooyinka madaxtinimo oo si rasmi ah uga furmay guud ahaan Dalka.
Madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle oo saaka codkiisa dhiibtay ayaa muddo 22 sano ah soo xukumayay, waxaannuu markii shanaad ka qaybgalayaa doorashada dalkaasi.
Xisbiyada mucaaradka ee ugu waaweyn dalka Jabuuti ayaa qaadacay ka qeybgalka doorashada madaxtinimo ee dalkaasi.
Madaxweynaha waxaa xilkan kula tartamaya ganacsade caan ah oo si weyn looga yaqaan Dalkaasi,kaas oo lagu magacaabo Zakaria Ismail Farah, oo ah 56 jir ku cusub siyaasadda.
Dad gaadhaya ilaa 215,000 oo ruux ayaa loo diiwaangaliyay in ay ka codeeyaan dalkaasi Jabuuti.
Taariikda doorashooyinka Djibouti
2005 April- Doorashadii madaxtinimada, Geelle wuxuu ahaa musharraxa keli ah ee ka qeybgalay
2016 April – Madaxweyne Geelle ayaa markii afaraad ku guuleystay doorashada madaxweynaha, inkastoo doorashadii 2010-kii uu sheegay inaanu tartami doonin.
Previous articleGuddoomiye Cirro oo ka hadlay xadhigga Jeneral Doollaal
Next articleSomalia: We have been able to come together